APONE KHABAR | हाम्रो मलमूत्रमा छ संसार जोगाउने शक्ति - APONE KHABAR हाम्रो मलमूत्रमा छ संसार जोगाउने शक्ति - APONE KHABAR
हाम्रो मलमूत्रमा छ संसार जोगाउने शक्ति
Sabitri Dhungana २०७९ बैशाख २०, मंगलवार १४:५२
शरीरबाट निस्कने मल र पिसाबको कुरा आउँदा मानिसहरूले प्रायः आफ्नो नाक र आँखा खुम्चाउने गर्छन्।
फोहोरको रूपमा मात्र नभई यसको कुराकानीलाई समेत घिनलाग्दो मानिन्छ। तर हाम्रो शरीरबाट निस्कने यही फोहोर निकै उपयोगी हुन्छ। यो यति शक्तिशाली छ कि यसले मानिसको भविष्य जोगाउने तागत राख्छ।
औसतमा एक वयस्क मानिसले हरेक वर्ष ९१ किलोग्राम दिसा र ७३० लिटर पिसाब विसर्जन गर्छ।
तर त्यो कहाँ जान्छ? के त्यसको उचित प्रयोग गर्न सकिन्छ?
मलमूत्रको प्रयोग नयाँ होइन। यो आज मात्र नभई प्राचीन कालदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको छ।प्राचीन रोममा मानिसको मलमूत्र (मानव फोहोर / मल र पिसाब) खेर फालिँदैन थियो।
प्रशोधन नगरिएको दिसा मलको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने मूत्रलाई कपडा बनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो।
सन् १५०९ देखि १५४७ सम्म इङ्गल्यान्डका रहेका राजा हेनरी आठौँको समयमा ‘ग्रूम अफ द स्टूल’ देशको महत्त्वपूर्ण पदहरूमध्ये एक थियो। यस पदमा रहेका व्यक्तिले राजाको नित्यकर्ममा सहयोग पुर्‍याउँथे।ती व्यक्तिलाई राजाको निकै निकट मानिन्थ्यो।
गोङ्ग किसान भनिने एक विशेष समूह मान्छेको मलमूत्र सफा गर्न रातको समयमा खटिन्थे। जम्मा भएको मलमूत्र उनीहरू स्थानीय किसानहरूलाई बेच्ने गर्दथे। मूत्रलाई त जम्मा पारेर छालालाई मुलायम पार्न प्रयोग गरिन्थ्यो।
हामी के गर्न सक्छौँ?
हामी पनि मलमूत्रको उचित व्यवस्थापनबारे हाम्रा पुर्खाहरूबाट सिक्न सक्छौँ। यसले हाम्रा कयौँ विद्यमान समस्याहरूको समाधान दिन सक्छ।
सबैभन्दा सुरुमा चर्चा गरौँ हाम्रो ऊर्जा आवश्यकताको बारेमा। पेटलाई सही ढङ्गमा सफा गर्नका निम्ति फाइबरयुक्त खानेकुरा आवश्यक पर्ने बताइन्छ जसका कारण कब्जियतको समस्या ठिक हुन्छ।
यसर्थ मल एक त्यस्तो स्रोत हो जसको आपूर्ति सधैँ यथावत् रहन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ऊर्जाको निम्ति पानी, हावा या अन्य स्रोतको आपूर्तिको तुलनामा यो बढी विश्वसनीय हुन सक्छ।
ढल प्रशोधन गरेपछि बाँकी रहेको फोहोर मिथेन उत्पादनको लागि राम्रो कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आधुनिक उपचार संयन्त्रमार्फत जीवाणुको प्रयोग गरी बायोग्यास बनाएर पाइपबाट घरघरमा पठाउन वा सवारीसाधनमा इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो पेट्रोल या डिजेलको तुलनामा ज्यादा स्वच्छ इन्धन हो। यसरी हामी मलको प्रयोगबाट पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीमा निर्भरता कम गर्न सक्छौँ।यसले विद्यमान प्राकृतिक स्रोतहरूमा दबाव घटाउने र कार्बन उत्सर्जन पनि कम गर्छ।
मूत्र कति उपयोगी
त्यसरी नै मूत्र पनि मानिसको लागि फाइदाजनक हुन सक्छ। संसारको ७२ प्रतिशत पानी कृषिमा प्रयोग हुन्छ। बढ्दो जनसङ्ख्या र जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पानीको माग बढ्ने जनाउँछ।
पछिल्लो एक दशकमा केही देशमा पानी अभावकै कारण मानिसहरू विस्थापित हुनु पर्ने परिस्थिति समेत आयो। ब्रिटेनमा प्रत्येक वयस्कले दैनिक ९० लिटर मूत्र विसर्जन गर्छन्। त्यसबाहेक घरमा उपयोग हुन सक्ने १४० लिटर पानी नालीमा बगाउँछन्।
के त्यो पानीलाई पुनर्नवीनीकरण गरेर पृथ्वीका लागि जोखिमपूर्ण बनेको खडेरीबाट बचाउन सकिन्छ? यसको जवाफ हुन्छ: सकिन्छ। यस कार्यका लागि प्रविधि उपलब्ध छ र पहिलेदेखि नै प्रयोग भइरहेको छ।
इजरेलले हाल प्रयोग गरिएको पानीको ९० प्रतिशत पुनः प्रयोग गरी कृषिका लागि वार्षिक रूपमा ५६,००० ओलम्पिक पोखरीहरू बराबर पानी उत्पादन गर्दछ।
कृषिको कुरा गर्दा कुनै पनि जीवित वस्तु बाँच्नको लागि फस्फोरसमा निर्भर हुन्छ। तर अत्यधिक उत्खननका कारण यो द्रुत गतिमा घट्दै गएको छ र पुनः पूर्ति गर्न सकिँदैन।
अमेरिका, चीन र भारतका आगामी पुस्ताले यसको अभावको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। कृषिमा फस्फोरस नहुँदा मानिसले वर्तमानको तुलनामा आधा मात्रै उत्पादन गर्न सक्छ।
यस परिस्थितिमा हामी हाम्रा पुर्खाहरूले जस्तै गरी खेतीयोग्य जमिनमा विकार अर्थात् मानव मलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। कम्पोस्ट शौचालय वा बायोग्यास उत्पादनबाट बचेको पोषक तत्त्वयुक्त सुख्खा मलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
शौचालयको पुनर्निर्माणले स्वच्छ शौचको पहुँच नभएका चार अर्ब २० करोड मानिसहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। पानीबिना सञ्चालन हुने शौचालयले हरेक दिन पाँच वर्षभन्दा मुनिका करिब ८०० बालबालिकालाई मृत्युबाट बचाउन सक्छ।
माइक्रोसफ्ट कम्पनीका सह-संस्थापक बिल गेट्सले शौचालयको बढ्दो बजार जीवन बचाउने मात्र नभई व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि फाइदाजनक रहेको बताएका थिए। सन् २०३० सम्ममा शौचालयको बजार छ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने आकलन छ।
त्यसको अर्थ हाम्रो दिसा हाँसोको वा समस्याको कारण होइन। यदि हामीले अहिले नै यसको उचित व्यवस्थापन र प्रयोगको पक्षमा काम गर्‍यौँ भने पृथ्वी जोगाउन मलमूत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ।